🥇 ▷ Berrito indies cusub ayaa lagu shaacin doonaa Xbox Game Pass ✅
Berrito waxaan la kulmi doonnaa wax cusub wuxuu ku sii jeedaa Xbox Game Pass. Adeegga Microsoft wuxuu sii wadaa inuu annaga noo keeno wararka shalayna, intii aan ku guda jirnay gudaha ‘Xbox’, waxaan la kulannay qaar ka mid ah. Sida, tusaale ahaan, imaatinka afar kulan oo cusub Xbox Game Pass oo laga keenay PC iyo sidoo kale ku dhawaaqista Afterparty iyo Felix the Reaper. Laba cinwaan oo cusub oo ku imaan doona Xbox Game Pass ee bishaan iyo ballantaas in ay na siin doonaan waxyaabo cusub oo hal abuur leh. Laakiin kuwanu ma noqon doonaan waxa kaliya ee loo yaqaan ‘Xbox Game Pass’ oo aan sida ugu dhakhsaha badan ku ogaan doonno, maxaa yeelay berrito magacyo cusub ayaa lagu shaacin doonaa iyagoo ka faa’ideysanaya barnaamijka gaarka ah ee ka dhici doona (emailka la ilaaliyo) Game Pass.
«Dhawrkeenna khaaska ah ee 2019 ee (emaylka oo la ilaaliyo) Game Pass ayaa goor dhow soo dhowaaday. Ku xidho berri, Sebtember 26, saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo PDT (18:00 CEST, Isbaanishka waqtiga maxalliga ah, 11:00 Mexico City) kanaalka YouTube ee Xbox si aad u ogaato dhammaan ciyaaraha gaadhaya Xbox Game Pass bilaha soo socda, by horumariyayaal madax-bannaan.
Munaasabadan, ka filo ogeysiisyada iyo ciyaarta ciyaarta ka soo qeybgalayaashu inay noqdaan kuwo cajiib ah sida Devolver Digital, Kooxda 17, Daedalic Entertainment iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaan sidoo kale wareysi la yeelan doonnaa shirkadaha kale ee rabta inay wadaagaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kulankooda, kuwaasoo mustaqbalka ka bilaabi doona Xbox Game Pass », waxaan ka aqrin karnaa bogga rasmiga ah.
Markaa waad ogtahay. Berrito waxaad leedahay ballan si aad ula kulanto kooxda cusub ee 17-ka kulan (Kusoo Badatay !, Aflagaado), Devolver Digital iyo Daedalic Entertainment, oo badanaa u soo bandhigi doona faahfaahin badan oo Felix the Reaper. Ka sokow dhacdo la yaab leh oo aan wali la shaacin.